Fihaonana Tamin’Ireo Manampahaizana Karibeana: Derek Walcott, Wilson Harris, Aubrey Williams · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2018 3:04 GMT
Famaky manaraka ny fandehan'ny famantaranandro, manomboka avy any ambony: Aubrey Williams ‘Tumatumari’ avy amin'i Aubrey Williams, izay ampahan'ny andian'ny sarindrindrina Timehri ao amin'ny seranampiaramanidina iraisampirenenea Cheddi Jagan, Guyana (CC BY-SA 4.0 avy amin'ny Wikimedia Commons); Bokin'i Wilson Harris “Tranobe an'ny Paona”; Hajian'ny paositra soedoà ho fahatsiarovana ny Loka Nobel momba ny literatiora azon'i Derek Walcott tamin'ny 1992.
Avy amin'i Ian McDonald
Pitik'afo avy ao amin'ny afo afovoany—Tsara vintana aho mba teo akaikiny tsara afaka nahatsapa ny afo be narehitr'ireo lehilahy ireo teto amin'izao tontolo izao.
(23 Janoary1930 – 17 Martsa 2017)
Tonga tao amin'ny fiainako ny poeta St. Losiana Derek Walcott, ny tononkalony no tena marina, tamin'izy 20 ary izaho 17. Namaky tononkalo tamin'ireo Anglisy Klasika teo amin'ny talantalana fametrahan'ny ray aman-dreniko boky fony aho tanora. Ary nampiditra ahy — ivelan'ny fandaharampianarana — tamin'ny tononkalon'i Gerard Manley Hopkins, izay nirehitra tato an-tsaiko tahaky ny fanilo, i John Hodge, mpampianatra mahafinaritra tao amin'ny Kolejin'ny mpanjaka tao Trinidad. Fa io no fotoana voalohany nahafantarako avy hatrany fa afaka soratan'ny Indiana avy any andrefana ny tononkalo tsara. Kanefa (angamba avy ao amin'ny tranomboky an'ny fanjakana, nefa mety avy tamin'ny tananan'i John Hodge koa) tonga teny amin'ilay boky kely “Tononkalo dimy ambiroapolo” aho, ilay boky voalohan'i Walcott. Tadidiko ny nakako azy teny amin'ny tanin'ny hivoka (savannah / savane ) an'ny Kolejy Imperialin'ny Fambolena Tropikaly (Toerampianarana UWI St. Augustine izy izao) izay falehako matetika hihazakazahana sy hanaovana fanazarantena amin'ny fifaninanana tennis. Ary rehefa avy nihazakazaka aho dia nipetraka teo amin'lay tohotohobato mankany amin'ilay tranoben'ilay Kolejy no sady mamaky an'ilay boky kely. Fahazavana naharitra tamin'ny fiainako ireo tononkalo tao anatiny.
Nanomboka teo, voavakiko daholo ny bokin'ny Walcott rehetra isaky ny mivoaka izy ireny. Mitondra tononkalo mahafinaritra tahaky iray rehetra nosoratan'i Derek—izay maty tamin'ny herintaona— ilay boky farany, “Vano Fotsy”.
Tsy afaka mitadidy ny lohatenin'ny boky rehetra aho, mikoriana anaty hatsarana tsy hay faritana izy ireo, fa tena nanana toerana goavana teo amin'ny fiainako. Tsaroako ny “Taratasy Iray avy any Brooklyn” avy tao amin'ny boky teo aloha “Ao anaty Alina Maitso”, tononkalo izay nampieritreritra ahy tamin'izany hoe afaka natao ny ampahan-tsoratra tonga lafatra. Mieritreritra an'ilay “Fiainana Hafa”, boky lava misy tononkalo aho, izay hinoako fa ny hany famoronana poetika tsara indrindra tamin'ny taonjato lasa teo—ary ny fanontanana narahana fanamarihana nataon'i Profesora Eddie tamin'io boky io no asa tsara indrindra tao amin'ny resaka vatsimpianarana tamin'ny fianarana literatiora indiana tandrefana. Ary ireo boky hafa rehetra an'i Walcott nandritra ny taona maro. Fiderana sy fankafizana fatratra ho atao mandrakizay doria.
Nifankahita matetika tamin'i Derek aho sady nandeha ihany ny taona, ny farany dia tany amin'ny Carifesta tamin'ny 2009 fony izy sy ny filohan'ny Guyana tamin'izany, Bharrat Jagdeo, nanana fifanakalozankevitra nahafinaritra momba ny lanja sy ny toeran'ny mpanoratra ary ny artista ao anatin'ny firenena iray. Naniry aho ny mba ho lasa akaiky kokoa an'i Derek ary mba ho lava kokoa ny resakay. Angamba ngeza loatra ny fiderako ny asany ka tsy afaka namela fandalinana an'ilay finamanana aho, izay midika fa manaiky ny fahalemen'ny tsirairay mitovy amin'ny fankafizana ny fahaizany. Saingy mandrakariva, tsy maintsy misy ahy sy ny tononkalo voasambotra foana anatin'ny tranonkalan'ny hatsarany sy ny hazavany.
(24 Martsa 1921-8 Martsa 2018)
Fotoana fohy taorian'ny nahatongavako tao Guyana (Guyana Britanika tamin'izany) tamin'ny 1955, tafahaona tamin'i Wilson Harris aho. Nampidirin'ny poeta Arthur Seymour tamin'ny asany aho tamin'ny fanomezana ahy ny dikan'ny tononkalo hafahafa sy maherin'i Wilson “Ny Mandrakizay Mankamin'ny Vanimpotoana”. Mpandrefy tany matihanina i Wilson ary nandany betsaka tamin'ny fotoanany tao amin'ny ala sy ny hivok'i Guyana, izay mameno ny saiko foana ireo fanahy goavana tao aminy. Fony izy tany an-drenivohitra, zatra nahita azy tao amin'ny tranon'i Martin Carter aho.
Nanana fitsiky izay nanakentrona ny tarehiny sy nanakona ny masony i Wilson, ary feo manokana, miadana ary malefaka. Fa rehefa nahazo aingampanahy avy amin'ireo hevitra tafiaraka ao an-dohany izy, lasa mihamafy ny feony no sady mamaky mafy ny andininy nosoratany mba hilazany ny eritreriny izy, ary lasa karazana hira ny teny ambarany ka vetivety eo hatsangany ny tanany mba hikapohana mafy an'i Martin na izaho eo amin'ny sandry na eo amin'ny lohalika, avy eo sartra kokoa ny hanisy maripiatoana sy hanasongadina an'izay tafavoakan'ny sainy. “Hitanareo!” hoy izy, “Hitanareo! Hitanareo!” Tsy nahita foana aho. Fa tsapako. Tsy mety takatro ny sasany tamin'ireo andininy novakiany. Tadidiko fa nahafinaritra sy nazava toy ireo renirano voasarona aloka any an'ala ny sasany. Tamin'izany fotoana izany, mety nanoratra ny asa iray manontolo miavaka, mijery lavitra ary mitokana izay taty aoriana navoaka tao Angletera ho “Tranomben'ny Paona” izy – tiako ny mieritreritra fa ireo andininy izay nanakapohany ny lohaliko no fanambaràna voalohany ny fahaizany!
Tsy dia hitako intsony i Wilson taorian'ny nodiany tany Londona. Fa nalefako ho azy ny dika telo tamin'ny bokina tononkalo nosoratako nandritra ny taona maro izay ary novaliany hatrany taminà tenikely tsotra sy voahevitra nosoratana an-tanana foana. Ary rehefa nitsidika azy tany an-tranony tao Londona aho, fanahin'ny fahalalampomba sy hatsarampanahy tokoa izy sy i Margaret vadiny. Nohazavainy tamiko ny làlana hafahafa farany nizoran'ny eritreriny mankany amin'ny marina sy ny mandrakizay, fa zara raha arako izy eo amin'itony làlana hafahafa saro-pantarina itony. Tamin'ny fihaonana iray, niteny izy fa nanomboka niditra tany an-dohany ny fikarohan'ireo fizisiàna mpandinika. Fa izaho tavela foana teo amin'ny fahatsapana hoe voatsindry sy voaolana mafy ny eritreritro rehefa manaraka azy mihoatra ny tontolo iainantsika izao aho, mba hahita ny fanahy taloha sy ny hery be izay mitondra ny tenantsika tsy mety maty, ary mamolavola ny hoavintsika rehetra
(8 May 1926 – 17 Aprily 1990)
Niaraka nandeha nanjono teny amin'ny Valan-Tahiry Lama niaraka tamin'ny Aubrey Williams aho. Tsy nahazo na inona na inona, fa nahazo lukanani roa antonony i Aubrey. Manjelanjelatra ny lokon'izy ireo rehefa mitsotra miala aina ao anatin'ny sambo, fa nandritra ny fotoana nodianay teny amin'ny trano fandraisambahin'i Lama, efa vasoky ny fahafatesana ny loko velombelona nahafinaritra nananan'ilay lukanani. Nanome fampitahana ahy i Aubrey. Miratra amin'ny lokon'ny paradisa ireo hosodoko nataony tao an-tsainy, saingy rehefa ataony eo amin'ny lamba ilay izy, lasa matroka ary lasa malahelo izy. Efa nanandrana mafy ny hitahiry ireo voalohany izay nitampify tao an-tsainy izy fa tsy nety foana. Karazana fahafatesana ny asa famoronana. Mahatalanjona ahy izay. Ho ahy sy ny hafa, mirehitra miaraka amin'ny afo tsy mety maty midedadedan'ny fahaizana ny andiana hosodoko goavany.
Hitako fa nanana ny fisiana faran'izay ngeza hitako hatrizay i Aubrey. Ny hafaliany sy ny fihomehiny ary ny fiderany ny tontolo no hery fototra izay nanainga ireo olona rehetra manodidina azy. Nolazainy ahy fa fony nandeha teny anaty ala mikitroka izy sy ny namany hitady hazo ala vaventy ary hanoroka azy miaraka amin'ny tànan'izy ireo mifampitantana mandra-pahatsapany fa niditra tao amin'izy ireo ny fanahiny tahaky ny hazavana na kotroka ao am-po. Tsy kilalao izany. Toy izany no nivavahany ary nanamboarany ny sainy ho an'ny asa. Miantso an'Andriamanitra mba hitondra izy. Rehefa nifankahita amin'i Aubrey aho ary niresaka taminy, ary rehefa namihina ahy mafy izy talohan'ny hialako ny trano, tsaroako taorian'izay fa tsy tena ampy tsara ny miaina fiainana tsotra.
Poeta, mpanoratra ary mpamoaka lahatsoratra izay milaza ny tenany ho “Antiguana avy amin'ny razambe, Trinidadiana tamin'ny fahaterahana, Goianaey tamin'ny fitsanganana ary Indiana tandrefana tamin'ny faharesendahatra” i Ian McDonald . Heverina fa klasikan'ny literatiora Karibeana ny bokiny “Ilay Hazon'ny Kôlibiria“